Waxaad hadda siin kartaa hadiyadda Cunnooyinka Shaagagga - Cuntooyinka Shaagagga
Hadda waxaad ku siin kartaa hadiyadda Cunnada Wheels
'Waa xilli! Maaddaama aan isku aragno inaan wax u iibsaneyno asxaabta iyo qoyska waqtiga ugu badan ee sanadka, waxaan soo bandhigeynaa hab aan ku siino hadiyadda Cunnooyinka Gawaarida qof aad daryeesho. Sannadkan, sii Cunto ku saabsan shahaado hadiyado shahaado ah qof aad jeceshahay! Hadiyado usbuuc cunnooyin ah $30, laba toddobaad oo loogu talagalay $60 iyo bil loogu talagalay $120.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijkeenna shahaadada hadiyadda ee CUSUB, iyo sida ay u shaqeyso, naga soo wac 612-623-3363 ama buuxi foomka hoose si aad u hesho macluumaad dheeraad ah!
Magaca oo buuxa*
Ku saabsan Cunnada Taayirrada Wheel Barnaamijka Shahaadada Hadiyadda
Waxaa laga yaabaa inaad leedahay xubin gaboobay oo reerkaaga ah ama saaxiib aad ogtahay oo doonaya inuu madax bannaanaado oo aad u adeegsan karto xoogaa caawimaad ah si aad sidaas u yeelatid, laakiin ma aadan helin meel ku habboon oo laga bilaabo. Waxaa laga yaabaa inaad bilowdo wada hadalka ku saabsan adeegsiga si aad u caawiso qof aad jeceshahay inuu gurigiisa ku sii jiro waxay umuuqataa hawl aad u adag.
Sannadkan, Cunnada Lugaha ayaa ku faraxsan inay bixiso barnaamij cusub oo loogu talagalay qoyska iyo asxaabta sida adiga oo kale ah. Waxaan bilownay barnaamij shahaado hadiyad ah oo kuu oggolaanaya inaad u iibsato toddobaad, laba toddobaad ama bil qiimaheeda cunnada qofkaas noloshaada ku jira oo adeegsan kara xoogaa caawimaad ah ilaalinta madax-bannaanida. Sidanna, waxay u oggolaaneysaa iyaga inay ku qabtaan waqtigooda.
Cuntada Lugaha ayaa u adeegta macaamiil kala duwan, qaar badan oo ka mid ah waayeel, laakiin sidoo kale kuwa la tacaalaya soo kabashada dhaawac ama jirro. Waxay sidoo kale waxtar weyn u yeelan kartaa dadka leh caqabadaha dhaqdhaqaaqa, gaar ahaan markay soo dhowaato xilliga qaboobaha iyo u kaxeynta bakhaarka ayaa ka sii khatar badan.
Haddii aad ka walwalsan tahay inaad la kulanto cunto caafimaad oo gaar ah, fursadaha ayaa ah Cunnooyinka Wheels-ka ayaa qaadi kara taas. Waxaan haynaa in kabadan 10 cunnooyin gaar ah oo kaladuwan oo ay kujiraan soodhiyam hooseeya, sonkorow iyo gluten la'aan.
Markaynu maalin walba keenno, cunto kulul waxaa geeya duhurkii qof mutadawiciin ah, oo xaq ugu leh albaabka qaataha. Sababtoo ah kama tageyno cunnooyinka gadaal markii qof albaabka ka jawaabi waayo, waxaa jira hubin amni oo otomaatig ah oo la soo saaray oo waxaad ogaan doontaa in xitaa haddii aadan halkaas joogi karin, qof uu fiirinayo qofka aad jeceshahay. Waxa kale oo jira menu toddobaadle ah oo kuwa qaatayaasheena ay dooran karaan oo ay si fudud uun u kululeynayaan cunnooyinka cusub ee la diyaariyey waqtigooda, taas oo ikhtiyaar u noqon karta qaatayaasha firfircoon ee firfircoon.
Cunnooyinka shahaadooyinka hadiyadeed ee Wheels waa la iibsan karaa oo hadiyad loo siin karaa qof kasta oo qaangaar ah ama qof kasta oo la macaamila naafonimo ama arrimo caafimaad oo ka dhigaya diyaarinta cuntada mid adag. Ma jiro nidaam aqoonsi, wicitaanka taleefanka ee lagu qoro wuxuu qaadanayaa illaa 5 daqiiqo.
Qofka aad jeceshahay wuu wici karaa markay diyaar yihiin, wuxuu lahadlaa qof dhab ah oo ka jawaabaa dhammaan su'aalahooda. Ma jiraan tirada ugu yar ee cuntada ee la isku qoro. Waxaan si fudud ugu baahan nahay inaan ogaano haddii ay jiraan shuruudo cunto oo aan u baahanahay inaan buuxino, tilmaamaha gudbinta waxay yihiin iyo goorta ay jeclaan lahaayeen inay bilaabaan.
U oggolow Meals on Wheels inay bilowdo wadahadalka ku saabsan inaad caafimaad qab iyo ammaan ku ahaato xilliga qaboobaha.
Halkan guji si aad u hesho macluumaad dheeraad ah iyo Su'aalaha la Weydiiyo ee ku saabsan helitaanka Cunnooyinka Wheels.
Nofeembar 26, 2018